test-test – Mangala Vihara
四念處 – Satipatthana (TBSC)
Dhammaduta Services (funeral and wake)
About MV Library
eBooks by MV (Chanting, Meditation etc)
Dhamma Talks – Recordings
Home » test-test
font-family: ‘Padauk’, sans-serif;
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော အဘိဓမ္မာတရားတော်များကို စင်္ကာပူရှိမြန်မာလူမျိုးများ တရားတော်များကို နာကြားသင်ယူနိုင်ရန်အလို့ငှာ မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း (စင်္ကာပူ)တွင် အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်းများကို အပါတ်စဉ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နှစ်စဉ် ကျင်းပလျက်ရှိသော အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲများကို စင်္ကာပူမှ စာဖြေရှင်များ အဆင်ပြေပြေ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရေးအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ စာဖြေဌာန အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှ စတင်၍ စာမေးပွဲများကို မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း(စင်္ကာပူ)တွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပပေးလျက်ရှိပါသည်။
A series of classes, conducted in burmese language is available in Mangala Vihara every weekend. Classes are mostly focused on Abhidhamma concepts. Mangala Vihara has been standing up as exam center since 2012 for Abhidhamma exams, held by Ministry of Religious Affair, Myanmar.
အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ – Classes
အောက်ဖော်ပြပါ တန်းခွဲများကို မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း (စင်္ကာပူ)တွင် အပါတ်စဉ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက် ရှိပါသည်။
The following classes are conducted in Burmese language.
အဘိဓမ္မာသင်တန်း ပထမဆင့် - Abhidhamma Class Level 1
Teacher ဆရာတော် ဦးစက္ကပါလ
Date/Time အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၆:၀၀ မှ ၇:၃၀ အထိ
Every Sunday 6:00 PM to 7:30 PM
Place ဒုတိယအထပ် Chew Quee Neo ခန်းမ
Chew Quee Neo Hall, Level 2
Lessons သင်ခန်းစာများ ကြည့်ရန်
အဘိဓမ္မာသင်တန်း ဒုတိယဆင့် - Abhidhamma Class Level 2
Teacher ဆရာတော် ဦးကုမာရ
Date/Time အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၄:၀၀ မှ ၅:၃၀ အထိ
Every Sunday 4:00 PM to 5:30 PM
Place တတိယထပ် သုဘဒ္ဒါခန်းမ
Subhadda Room, Level 3
အဘိဓမ္မာသင်တန်း တတိယဆင့် - Abhidhamma Class Level 3
Date/Time အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၂:၀၀ မှ ၃:၃၀ အထိ
Every Sunday 2:00 PM to 3:30 PM
အဘိဓမ္မာသင်တန်း ဒုဆင့်/ တဆင့် - Abhidhamma Class Level 2/3
Teacher ဆရာတော် ဦးဉာဏဝရ
Date/Time အပါတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ညနေ ၇:၀၀ မှ ၈:၃၀ အထိ
Every Saturday 7:00 PM to 8:30 PM
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း ပထမဆင့် - VisuddhiMagga Class Level 1
Teacher ဒေါ်မာလာအောင် (B.A Buddhsim)
Daw MarLar Aung (B.A Buddhsim)
Date/Time အပါတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ညနေ ၅:၃၀ မှ ၇:၀၀ အထိ
Every Saturday 5:30 PM to 7:00 PM
Place တတိယထပ် အခန်း ၃
Room 3, Level 3
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း ဒုတိယဆင့် - VisuddhiMagga Class Level 2
အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲများ – Abhidhamma Exams
အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲနှင့် ပါက်သက်သော အချက်အလက်များကို အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
A highlight of Abhidhamma exam – interviewed by Skynet Broadcasting Programme
· © 2020 Mangala Vihara · 30 Jalan Eunos Singapore 419495 - Tel: +65 6744 4285 ·